Tranoben’ny Tantsaha: hampandroso ny eny ambanivohitra | NewsMada
Tranoben’ny Tantsaha: hampandroso ny eny ambanivohitra
Par Taratra sur 12/10/2018
Mandray anjara amin’ny famolavolana sy ny fanatanterahana ny paikadim-pirenena momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny Tranoben’ny tantsaha mpamokatra (TTM). Ao anatin’izany ny famafisana ny fahaiza-manaon’ny Vondrona tantsaha mpamokatra.
Nifidy ny mpikambana miisa 22 ao anatin’ny birao nasionaly ny filankevi-pitantanan’ny TTM, ny 2 sy ny 3 ary ny 4 oktobra teo. Nandray anjara tamin’izany ny solontena miisa 13 avy any amin’ny faritra 22. Lany ho filohany Rtoa Razafimbololona Angeline Lydia, filoha lefitra Rakotovao Andriamampiandra Roland, mpitambola i Esperance Pella Albertine, miampy ireo mpikambana hafa.
Anisan’ny hataon’ny biraon’ny TTM vaindohan-draharaha ny fanitarana ny tsenam-bokatra ho an’ny tantsaha. Hotohanana koa ny fiarovana ny vokatra eto an-toerana sy ny fifanaraham-barotra amin’ny fanondranana any ivelany. Nambaran’ny talen’ny tohana ho an’ny sehatra tsy miankina sy ny fiaraha-miombon’antoka (DASSPP) ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana, Randriarimanga Niry, fa manohana ny fananganana ny TTM ny minisitera. Antony, antoka amin’ny fanatanterahana ny fampandrososana ny eny ambanivohitra sy ny fanatanterahana ny paikadim-panjakana amin’ny fiatrehana ny tsena fa tsy mionona amin’ny famokarana fotsiny.